Manokatra fiara tsy misy lakile - sandoka? - Ikkaro
firosoana >> Lohahevitra hafa >> Manokatra fiara tsy misy lakile - sandoka?
Manokatra fiara tsy misy lakile - sandoka?
Efa ela izahay no tsy nilalao mihaza Fakes.
Ity misy ity horonan-tsary asehonay anay ity ny fomba fanokafana fiara tsy misy lakile, amin'ny baolina tenisy ihany. Tena tsy mino an'ity horonantsary ity aho, na dia mbola tsy nanandrana azy io aza.
Eto isika dia afaka mahita ilay andrana mitovy amin'ny andrana amin'ny The Myth Hunters
Inona avy ireo fomba hafa hanokafana fiara tsy misy lakile fantatrao?
Mazava fa ny hevitr'ity lahatsoratra ity dia tsy ao anatin'ny fangalarana fiara, fa ny ahafahana manokatra ny antsika raha sanatria very ny lakile na raha maodely taloha izy ary mihidy miaraka aminy ny lakileny.
Ahoana no anaovana rojo vy
Fahamarinana tsy mahazo aina
Hevitra 15 momba ny "fanokafana fiara tsy misy lakile - hosoka?"
6 Jona 2010 amin'ny 4:35 maraina
Tsy mila manamboatra lavaka ianao, raha tsy fiolahana kely manodidina ny 2cm eo ho eo, amin'ny fampiasana ny fomba fanazavan'ilay horonantsary .., ny hany lesoka dia ny fiasan'ny modely golf wolkswagen taloha 1 ihany ... tadidinao ilay angano azo ovaina ny tampony malefaka ??? tsara izany ... ary tamin'ny maodely voalohany ihany dia nahitsiny avy eo
Azonao atao ihany koa ny manokatra opel kadet gsi (angano) miaraka amina biriky fisaka amin'ny alàlan'ny fametahana tsindry kely mitovy amin'ny hafainganana toy ny hoe manokatra azy amin'ny lakile voalohany ianao ...
PS, ny namako tamin'ny fahazazako dia tsy varimbazaha madio ... 0 :)
16 Jolay 2010 amin'ny 7:17 hariva
Miguel no anarako ary tsy afaka manokatra ny varavarana aho fa sarintsariny
4 septambra 2010 tamin'ny 3:04 maraina
TSY AZO ATAO AZA AZA ATAO, VIDEO IZAO NO VORATRA AVY AMIN'NY FIVERENANA CAMERA NATAON'NY SIERRE CENTRALIZED ... «F»
2 martsa 2011 amin'ny 7:32 maraina
Azoko atao aminao ny milaza aminao fa marina izany, farafaharatsiny amin'ny fiara vaovao izay tsy mbola nisy nanamboatra na nikitika ireo singa anatiny ao am-baravarana.
Ny varavaran'ny fiara ankehitriny dia voaisy tombo-kase amin'ny tombo-kase plastika izay misoroka ny fivoahan'ny rano avy any ivelany, avy eo amin'ny alàlan'ny fampidirana rivotra kely eo ambany tsindry avy amin'ny lavaka tokana ahafahan'ny ranoka miditra, lozika ny rivotra, avy eo azo atao ny mitsindroka rivotra ao am-baravarana miaraka amin'ny baolina tenisy.
Ny fotokevitra dia fototra, miasa toy ny plungers na silinder an'ny jack hydraulic na pneumatic izy io, satria ny fiantohana dia manisy tombo-kase ny lavaka itodihany.
Tsara ny manonona fa azo sokafana ihany izy io raha toa ka mitovy ny rafitry ny hidin-trano amin'ny fiara aseho amin'ny horonantsary, fa tsy ny rafitra hafa mihidy avy na mifanila amin'ny tahony mba hanokatra ny varavarana avy ao anatiny.
19 Jolay 2011 amin'ny 6:42 hariva
Sandoka kokoa io horonan-tsary io noho ny faktiora 6 euro: D
Ny mitranga dia misy olona faha-3 manokatra zavatra toy izao
X = Ilay mamoha varavarana
V = zoro fijerena fakan-tsary
T = Fakan-tsary
H = Olona tsy fantatra manokatra ny fiara amin'ny bokotra lavitra
18 Desambra 2011 amin'ny 9:12 alina
Raha marina izany dia tsy ho maro ny cohes